त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनमा प्रवेश
खेलकुद » फुटबल »
गेविन्द पोख्रेल, उर्लाबारी, ३१ वैशाख
पहुना टिम भारतको कञ्चनजंगा फुटबल क्लबलाई फराकिलो गोल अन्तरले हराउदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले उर्लाबारीमा जारी पाँचौ मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनमा प्रवेश गरेको छ । गोल्डकपमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले कञ्चनजंगा फुटबल क्लबलाई चार गोलको विरुद्ध शून्य गोल अन्तरले हराउदै आपूmलाई अन्तिम चारमा आप्mनो स्थान पक्का गरेको छ ।
प्हिलो हाफको १५औ मिनेटमा आर्मीका टंक बस्नेतको पासमा नवयुगले आफ्नो टिमको तर्फबाट पहिलो गोल गरे । श्रेष्ठले हेड मार्फत गोल गरेका हुन् । श्रेष्ठको गोलबाट दबाबमा परेको कञ्चनजंगा माथि आर्मीले गोल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । आर्मीका स्टारका स्ट्राइकर भरत खवासको १७औ मिनेटमा गोल गर्ने अवसर प्राप्त गरे पनि उनको प्रहारले पोष्ट देख्न सकेन । खवासका लागि २०औ मिनेटमा टंक बस्नेतले गोल गर्ने अर्को अवसर जुराइदिएपनि कञ्चनजंगाका किप्पर नाम्तु मुजुम्दारले विफल पारिदिए ।
कञ्चनजंगाका लागि २५औँ मिनेटमा राज सुब्बाको हेड प्रहार आर्मीका किप्पर सुशिल श्रीवास्तवले विफल पारिदिए । पहिलो हाफको ४० औ मिनेटमा सन्तोष तामाङको फ्रि–किको मद्दत आर्मीका कप्तान भरत खवासले गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई दुई गोलको अग्रता दिलाए ।
दास्रो हाफपछि कञ्चनजंगाले आर्मीमाथि कुनै दबाबमा पार्न सकेन । आर्मीका स्टार स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवासको पटक–पटकको प्रहार असफल भयो । दास्रो हाफको १९आँे मिनेटमा नवयुगको प्रहार पोलमा ठोक्किएपछि फर्किएको बललाई विमल रानाले सदुपयोग गर्दै टिमको तर्फबाट तेस्रो गोल गरे । दास्रो हाफको ३९ औ मिनेटम नवयुगले अर्को गोल गर्दै टिमलाई ४ गोलको अग्रता दिलाए । दुईजना अफ्रिकन खेलाडी सहित मैदानमा उत्रिएको कञ्चनजंगा प्रतियोगिता अवधिभर दबाबमा रह्यो । प्रतियोगिताको म्यान अफ द म्याच त्रिभुवन आर्मीका कप्तान भरत खवास घोषित भए ।
विजेता आर्मीले आगामी शनिबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा विआरसी भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । शुक्रबारको पहिलो समिफाइन खेल आयोजक मदन भण्डारी स्पोट्रोस एकेडेमी र एपिएफ बीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
पाचौ संस्करणको मदन भण्डारी गोल्डपकको विजेताले नगद दुई लाख सहित ट्रफि र मेडल पाउने छ ।
नेपाल कठिन समुहमा माघ,११, मंगलबार फुटबल
मड्रिडलाई पछि पार्दै म्यानचेस्टर युनाइटेड बन्यो धनी क्लब माघ,६, बिहिबार फुटबल
राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगिता जनकपुरमा हुने माघ,४, मंगलबार खेलकुद समाचार
किन जाँदै छन बिमल, स्पेन ? माघ,३, सोमबार फुटबल
एपिएफलाई हराउदै मदन भण्डारी फाइनलमा ३१ वैशाख फुटबल
त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनमा प्रवेश ३१ वैशाख फुटबल
दोश्रो काँकरभिट्टा सिटी लिग कम नकआउट फुटबल, ह्वाइट डेमोन एफसी विजयी २८ बैशाख २०७२ फुटबल
कति कमाउछन् रोनाल्डो र मेसी ? २५ बैसाख २०७३ फुटबल
राष्ट्रिय लिग भलिवलः उपाधि पुलिसलाई ६ बैशाख, झापा । खेलकुद समाचार
नेपाल र नामिबिया आज भिड्दै क्रिकेट